Usagaqele esobuMengameli osehlale iminyaka esihlalweni eCongo - Bayede News
Usagaqele esobuMengameli osehlale iminyaka esihlalweni eCongo
Isithombe: nguSteeve Rodric
Isexwayiso sikadokotela ngesifo sofuba
UMengameli waseCongo uDenis Sassou Nguesso kubukeka esafuna ukwandisa isikhathi sakhe esihlalweni okhethweni lwangeSonto lapho ethembise ukuvuselela umnotho waleli lizwe ontengantengayo,.
USassou oneminyaka yobudala engama-77 owayeyisosha lomoya wangena ezintanjeni zombuso zaleli lizwe elikhiqiza uwoyela ogwini olusentshonalanga maphakathi ne-Afrika mhla kuvukelwa umbuso ngowe-1979.
Wehlulwa okhethweni lokuqala olwalunamaqembu amaningi ngonyaka we-1992 kepha waphinde wazuza amandla ombuso ngowe-1997 ngemuva kwempi yezakhamuzi kuyimanje usebuse leli lizwe cishe iminyaka engama-37 sekuhlangene.
USassou uzobhekana nezimbangi eziyisithupha okhethweni oluphethwe ngokuqinile uHulumeni wakhe futhi olugxekwa ibandla lamaKhatholika elinethonya elikhulu kuleli lizwe kanye nezishoshovu zamalungelo abantu.
Waziwa njengo”Emperor” kwabanye abalingani bakhe base-Afrika ngenxa yempilo yakhe ende kanye neqhaza lakhe lokuba umholi osekhulile esifundeni. USassou uthe uzosebenzisa lonke ulwazi lwakhe ukuvuselela umnotho ogcwele izikweletu uma enqoba eminye iminyaka emihlanu esemandleni.
Ukwehla ngamaphesenti ayisi-8 komkhiqzo wezwe iGross Domestic Product (GDP) ngonyaka odlule kudalwe ingcindezi yokhuvethe kanye nokwehla kwentengo kawoyela emhlabeni jikelele, kepha kulindeleke ukuthui iGDP okungenani ikhule cishe ngephesenti elilodwa kulo nyaka.
“Izakhamuzi zidinga abantu abanolwazi futhi ngifaka wonke amava ami ekusebenzeleni intsha yezwe lakithi,” esho emkhankasweni wakhe.
Imbangi yakhe enkulu uGuy-Brice Parfait Kolelas, owayenguNgqongqoshe kuleli zwe owaphuma isibili okhethweni lwangowezi-2016 lapho athola amavoti angamaphesentyi ali-15.
Abanye ababegaqele lesi sikhundla abaphuma indawo yesithathu neyesihlanu ngemuva kwesikhathi baboshwa bagwetshwa ngecala lokuba nezibhamu bengenazo izincwadi ezibagunyaza ukuba babenazo.
UKolelas yena wathembisa ukuletha uguquko aphinde abhekane ngqo nenkohlakalo, kepha abahlaziyi bepolitiki bathi unamathuba amancane okunqoba uSassou ngenxa yokuthi abantu abathembekile kuyena (Sassou) balawula izikhungo ezinkulu.
“Iqembu eliphikisayo libukeka lisesimweni esibi kakhulu ukudlula ngesikhathi bezama ukukhipha uMengameli esikhundleni ngonyaka wezi-2016,” kusho uMaja Bovcon, ongumhlaziyi omkhulu enkampanini iVerisk Maplecroft.